ရယ်ရယုံ (၄၅) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ရယ်ရယုံ (၄၅)
Posted by etone on Oct 1, 2010 in Aha! Jokes, Satire |0comments
အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာ ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ တံခါးဂိတ်မှာ ဆုံကြသတဲ့….
ပထမအမျိုးသမီး။ ။ ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး သေခဲ့ရတာလဲ…?
ဒုတိယအမျိုးသမီး။ ။ အေးခဲပြီး အအေးပတ်ပြီး သေခဲ့ရတာ…ဒါနဲ့ ရှင်ရော….?
ပထမအမျိုးသမီး။ ။ နှလုံးသွေးကြော ရုတ်တရက်ပိတ်ပြီး သေခဲ့ရတာ… ကျွန်မယောက်ျားနောက်တစ်ယောက်နဲ့အချစ်ဇာတ်ခင်းတယ်ထင်လို့ တစ်အိမ်လုံးပတ်ပြေးပြီး အဲဒီမိန်းမကို လိုက်ရှာခဲ့တာ… အဲဒီမိန်းမကို ရှာမရတဲ့အဆုံး ခြေကုန်လက်ပန်းကျ ဖတ်ဖတ်မောပြီး နှလုံးသွေးကြောရပ်ပြီး သေခဲ့ရတာ… ဒုတိယအမျိုးသမီး။ ။ ရှင် ရေခဲသေတ္တာထဲကို ကြည့်သင့်တယ်…အဲဒီလိုဆိုရင် ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စလုံး ဆက်ပြီး အသက်ရှင်နေကြဦးမှာ…﻿
စစ်တက္ကသိုလ်တွင်….တာဝန်ခံဗိုလ်ကြီးက သွက်လက်ဖျတ်လတ်ပြီး ပါးနပ်ပုံရသော ဗိုလ်လောင်းကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်သည်…
“မြန်မာ့ စစ်သူရဲကောင်းတွေထဲက မင်းလေးစားတဲ့သူရဲကောင်း..နာမည်တွေပြောပြပါ…”
“ဟုတ်ကဲ့…မဟာဗန္ဓုလရယ်.၊ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရယ်…..အဲ ပြီးတော့ဒီက ဗိုလ်ကြီးနာမည်လေးသိပါရစေခင်ဗျ…”
“ဒါက လွယ်ပါတယ်ဟာ…နင်အခု နင့်ချစ်သူနဲ့ပဲ ဆက်တွဲနေလိုက်…ပြီးတော့မှ ချမ်းသာတဲ့လူနဲ့လက်ထပ်လိုက်..”
( ၁ )ယောက်မှာကမြင်း(၁)ကောင်ရှိပြီးကျန်(၁)ယောက်မှာကလှေတစင်းရှိကြတယ်တဲ့ကွယ်…
“ စိတ်ချ စိတ်ချ ဖဲဝိုင်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင် ဆက်ဆက် လာခေါ်မယ် စောင့်နေ “
“ ခုနက စတိတ်ခုံပေါ်မှာ အသံပြဲကြီးနဲ့ ဟဲဗီးသီချင်းဆိုသွားတာ ခင်ဗျား မဟုတ်လား ”
အဖေက ကျွန်တော့်ကို နိုက်ကလပ်တွေမသွားဖို့၊ မလုံတလုံဝတ်ထားတဲ့ဖက်ရှင်ရှိုးတွေသွားမကြည့်ဖို့ အမြဲပြောတယ်။အဖေ့စကားနားမထောင်ဘဲအဲဒီလိုနေရာမျိုးတွေ သွားရင် မမြင်သင့်တာတွေမြင်တတ်တယ်လို့ အဖေက ပြောပါတယ်။အဖေက မသွားနဲ့ ပြောမှ တခါမှမရောက်ဖူးတဲ့ကျွန်တော်သွားချင်လာမိတယ်။တရက်မှာ အဖေမသိအောင် တိတ်တိတ်လေးလက်မှတ်ဝယ်ပြီး ကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်…။၀င်ဝင်ချင်းပဲ မမြင်သင့်တာကိုကျွန်တော်မြင်သွားတယ်။ ဘာမြင်ခဲ့လဲသိလား…ကျွန်တော့် “အဖေ” ကိုလေ….
ဆေးရုံအုပ်။ ။ ကိုဘမောင်၊ ခင်ဗျားရဲ့မနေ့က လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ခင်ဗျားကို လူကောင်းတစ်ယောက်လို့ထောက်ခံနေပါတယ်။
မနေ့က ခင်ဗျားဟာ ရေထဲဆင်းပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေကြောင်းကြံတဲ့ လူနာတစ်ယောက်ကို ကယ်တင်ခဲ့တယ်။
ဒီအတွက် ခင်ဗျားကိုကျနော် ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ဆေးရုံဆင်းခွင့်ပြုမယ်။
ဒါပေမယ့် စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုက မနေ့က ခင်ဗျားကယ်ခဲ့တဲ့ လူနာဟာဒီနေ့မနက်ပဲ ကြိုးဆွဲချပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေသွားပြီဗျာ။
ကိုဘမောင်။ ။ ဟုတ်လား၊ စိတ်မကောင်းလိုက်တာဗျာ။ မနေ့ကညကတောင် သူ့အ၀တ်အစားတွေ ရေစိုနေလို့ ကျနော်သူ့ကို လည်ပင်းကနေ ကြိုးနဲ့ချည်ပြီးလှန်းထားပေးလိုက်သေးတယ်။﻿…
ဟိုတယ်က ၀န်ထမ်းကို ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထုတ်ပြတယ်.
ဒါနဲ့..အဲဒီထဲက မိန်းမတစ်ယောက်ပုံကို လက်ညှိုးထိုးပီး
၀န်ထမ်းက မကဲဘူး အဲဒီမိန်းမက အငြိမ်ဆုံးပဲတဲ့
…ဟင်.ဒါဆို ဟိုတစ်ပတ်က ပါလာတဲ့ ယောက်ျားက သူ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူပေါ့တဲ့…………..
“အခု မိတ်ဆွေကို ဘယ်လို ကုသနေပါသလဲ။´´
“စအိုထဲကို ပိုက်သွင်းပြီး ဆေးတွေ
ဘေးကုတင်က လူနာကို စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက
“မိတ်ဆွေကကေရာ ဘာရောဂါနဲ့ ဆေးရုံတက်
၃ တန်းကျောင်းသားလေးမောင်အေးသည်၊အတန်းပိုင်ဆရာမကို “နင်” “ငါ”အသုံးအနှုန်းဖြင့် ပြောလေ့ရှိ၏ ။ တစ်နေ့တွင် ပြစ်ဒဏ်ပေးသည့် အနေနှင့်ဆရာမသည်”ဆရာမ” “ကျွန်တော်” ဟူသောစာလုံးများကိုအကြိမ်၅၀တိတိမောင်အေးအားရေးခိုင်းသည်။မောင်အေးက အကြိမ် ၅၀အစားအကြိမ်၁၀၀ရေးချလိုက်သည် နောက်တွင်ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာသုံးနှုန်းပြောဆိုရမည်ကိုမောင်အေးသိကောင်းပြီဟ…ုဆရာမယူဆသည်နှင့်
အိမ်ရှေ့မှ လူခေါ်ခေါင်းလောင်းသံ မြည်လာသည်။ ယောက်ျားလုပ်သူက တံခါးသွားဖွင့်ပေးသည်။
အပြင်တွင် ဓားမြှောင်ကိုင်ထားသော မျက်နှာဖုံးစွပ် လူတစ်ဦး ရပ်နေသည်။ ပြီးတော့ အသံအက်အက်ကြီးဖြင့် ယောက်ျားလုပ်သူအား ပြောသည်။
“ကျုပ်က လူသတ်သမားပဲ။ မိန်းမတွေကို လည်လှီးပြီး သတ်ပစ်ချင်တယ်”ယောက်ျားဖြစ်သူက ထိုလူအား ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲ အိမ်ထဲသို့ လှမ်း…အော်သည်။
“မိန်းမရေ၊ ဟောဒီမှာ မင်းနဲ့တွေ့ချင်လို့တဲ့။ ဧည့်သည် လာတယ်ဟေ့။”
ပထမလူ=မနေ့ညက မင်းတို့လင်မယား ရန်အကြီးအကျယ် ဖြစ်ကြတယ်ဆို။ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုပြီးသွားတာလဲ။
ဒုတိယလူ=ဘယ်ရမလဲ ဒီမိန်းမဒူးထောက်ကျသွားတာပေါ့။ ဒူးနှစ်ဖက်တင်မကဘူး လက်နှစ်ဖက်ပါ ထောက်သွားတယ်ကွ။
ပထမလူ=အလဲ့တယ်ဟုတ်ပါလား၊ မင်းမိန်းမကလေးဖက်ထောက်ပြီးဘာပြောလဲ ဆိုစမ်းပါဦး။
စားပွဲထိုးက ပုရွတ်ဆိတ်ကို လက်ဖဝါးနဲ့ ချက်ချင်းရိုက်ချလိုက်ပြီး အားတုန့်အားနာနဲ့ ” ဆောရီးနော်..ကျွန်တော် နောက်တစ်ခွက် ချက်ချင်းလဲပေးမယ်” လို့ ပြောလိုက်တယ်။